झापाको अञ्चल अस्पतालमा आईसियु सेवा सुरु, स्थानीय हर्षित – Himalaya TV
Home » समाचार » झापाको अञ्चल अस्पतालमा आईसियु सेवा सुरु, स्थानीय हर्षित
झापाको अञ्चल अस्पतालमा आईसियु सेवा सुरु, स्थानीय हर्षित
११ जेष्ठ २०७४, बिहीबार २०:०८
पंकज शर्मा / झापा जेठ ११ । झापाको भद्रपुरस्थित मेची अञ्चल अस्पतालमा बिहीबारदेखि करिब १ करोड लागतमा आईसियु (सघन उपचार कक्ष) सेवा सञ्चालनमा ल्याइएपछि अञ्चलबासीको दीर्घकालीन समस्याको अन्त्य भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रलायले सन् २०११ मा मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरको स्तरोन्नती र बिरामीको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आईसियु सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, आइसियु सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको आवश्यकता र चिकित्सक अभावले लामो समयदेखि आइयिसु सञ्चालन आउन सकेको थिएन ।
अस्पताल विकास समितिले बिहीवार एक कार्यक्रमकाबीच आईसियु सेवाको शुभारम्भ गरेको हो । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्री र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राम कटटेलले आईसियु सेवा कक्षको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । अस्पतालमा आईसियु सेवा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयबासी हर्षित भएका छन् ।
आईसियु कक्षमा बिरामी राखेर उपचार सुरु भइसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । आईसियु सेवा सञ्चालनका लागि एनोसथेरियोलोजिस्ष्ट डा. जोशनलाल बज्रचार्यको नेतृत्वमा ५ जना मेडिकल अफिसर राखिएको छ । आइसियु सञ्चालनका लागि अस्पताललाई केही चुनौती भएपनि बिरामीलाई भरपर्दो र सस्तो सुलभ दरले सेवा प्रदान गरिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले बताए ।
बिरामीको समस्या र माग बमोजिम अस्पतालमा आईसियु सञ्चालन भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राम कट्टेलले जानकारी दिए । अब सानोदेखि जटिल उपचार पनि यही अस्पतालमा हुने भएकाले बिरामी रेर्फर भएर अन्यत्र जानु पर्ने समस्या टरेको अध्यक्ष कट्टेलले बताए ।